ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावरको आईपीओमा आवेदन दिने मंगलवार अन्तिम दिन | Artha News Nepal
Home	ऊर्जा	ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावरको आईपीओमा आवेदन दिने मंगलवार अन्तिम दिन
ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावरको आईपीओमा आवेदन दिने मंगलवार अन्तिम दिन
काठमाडौं – ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने माघ २७ गते अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले माघ २३ गतेदेखि सर्बसाधारणको लागि आईपीओ विक्री खुला गरेको हो । आईपीओ विक्री खुलाको छिटो अवधिभित्रै विक्री बन्द हुन लागेको हो ।
विक्री खुला भएको तेस्रो दिन आइतवारसम्म कम्पनीको आईपीओमा १ करोड ४८ लाख ८५ हजार ३१० कित्ताको खरीद माग भएको छ । जुन मागभन्दा ४ दशमलव ५८ गुणा बढी हो । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले दिएको जानकारी अनुसार उक्त आवेदन ८ लाख १६ हजार १५५ जना आवेदकहरुबाट पर्न आएको हो ।
कम्पनीले प्रतिशेयर रू. १०० अंकित मूल्यको ३४ लाख ९६ हजार ४०० कित्ता शेयर विक्री खुला गरेको हो । यस अघि आयोजना प्रभावित स्थानियलाई आईपीओ विक्री खुला गर्दा वितरण हुन नसकेको १६ लाख ८६ हजार ४०० कित्ता शेयर समेत जोडेर कम्पनीले सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेको हो ।
कुल कित्तामध्ये १ लाख ७४ हजार ८२० कित्ता शेयर सामूहिक लगानीकोषको लागि र ६९ हजार ९२८ कित्ता शेयर कम्पनीका कर्मचारीमा बाँडफाँट गरी बाँकी ३२ लाख ५१ हजार ६५२ कित्ता शेयर सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्कासनमा आएको हो ।
उक्त आईपीओ खरीदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
कम्पनीको आईपीओलाई केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी बी प्लस (आइएस) रेटिङ प्रदान गरेको छ । उक्त रेटिङले निष्कासनकर्ता कम्पनी वित्तीय दायित्व पूरा गर्न उच्च जोखिममा रहेको संकेत गर्दछ । यो आईपीओ विक्री प्रबन्धकमा बिओके क्यापिटल रहेको छ ।
विक्री प्रबन्धसँगै आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । साथै मेरो शेयर सफ्टवेयर र मेरो शेयर मोवाइल एपबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।
यो आईपीओ विक्री गर्न कम्पनीले माघ २ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएको थियो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ४४ करोड रहेको छ । सर्वसाधारणलाई पनि शेयर विक्री गरेपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ८० करोड पुग्नेछ । कम्पनीको अधिकृत पूँजी रू. २ अर्ब ५० करोड रहेको छ ।
यस कम्पनीले खानीखोला १ जलविद्युत आयोजना सञ्चालक गरिरहेको छ । नयाँ आयोजना निर्माणको क्रममा कम्पनीले दोलखा जिल्लामा ४० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । उक्त आयोजनाबाट २०७८ वैशाखदेखि विद्युतको व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गर्ने योजना कम्पनीको रहेको छ ।
hydro ipohydro power ipoipoipo nepalआईपीओआवेदनग्रीन लाइफ हाइड्रोपावर